Dziviriro ndiyo nzira bedzi – Gango
Dziviriro ndiyo nzira bedzi
Inzwi rinoti kudzivirira rinoreva zvakawanda sekuzvichengetedza kubva kune chakaipa, kuchengetedza musha wako, mhuri yako kana zvinhu zvatinotyira kuti zvingatorwe netsotsi.
Hakuna munhu anozvidzivirira kubva kune chakanaka nekuti hapana asingade kufamba nechakanaka kana kuenzaniswa nechakanaka. Makare tichikura mumarokesheni dzimba zhinji dzaiva dzisina fenzi yekuchengetedza pamba naizvozvo vanhu vaigara vachichema nekubirwa kusvikira fenzi dzava dzekuti asina ibenzi.
Izvi hazvaireva kuti zvaipedza kubiwa kwete panenge pabiwa wainzwa kuti fenzi yachekwa zvaiva nani nekuti vabereki vanenge vaedza kuzvidzivirira musha.
Ndiri panyaya yedziviriro svondo rino ndakanangana neutachiona hweHIV (Human Immune Deficience Virus), izwi rekuti dziviriro rinoramba richidevedzera mupfungwa dzangu kuti ndiyo nzira chete inoita kuti tikunde muhondo yatinayo neHIV neAIDs.
Nekuda kwedenda redzihwamupengo (Covid-19) vazhinji vedu tavekukanganwa kuzvidzivirira kuhutachiona hweHIV. Pese pese yangove kunatira kana zumbani, hapachina arikumbotaura nezvekuti vanhu ngavazvidzivirire kuhutachiona hweHIV kupfurikidza nekupfeka kondomu uye kuti vane hutachiona ngavarambe vachimwa mishonga yavo nekunotariswa mamiririro eCD4 yavo.
Kuzvidzivirira pakutapurirana hutachiona hweHIV hwawanga usina, kune uyo ari kurarama nahwo kuzvidzivirira kutapurirana zvirwere zvakawanda zvepabonde nekuti wafunga kuti kuva nayo rave rezinesi rekufamba uchirara pese pese.
Tikasava nepfungwa yedziviriro matiri zvinooma sekufema mumvura. Ngatitendei kuuya kwakaita maARV nekuti utano hwevanhu vari kurarama neutachiwona hweHIV hwachinja asi dziviriro inoramba iri nzira yehutano husina tumbuyu mukati.
Vaimbova chiremba mukuru Dr Timothy Stamps avo vave nenguva vashaya vakatisiira mashoko ekuti tava kushaya chinangwa munyaya yekuzvidzivirira kubva kuutachiona hweHIV. Vakati ivo zvakakosha kukurudzira kuzvidzivirira nekuti vanhu vakawanda vari kutaputira HIV.
VaStamps vakasiya varaira kuti kana tikanyanyovarairwa nenguva isipi tinozoyeuka bako tanaiwa mushure mokunge toona huhwandu hwevanhu vane HIV huchiwedzera zvakare.
Tichine vanhu munyika muno vanoti chii chichiri kuramba chichitaurwa pamusoro peHIV chatisina kunzwa, asi chandinoziva ndechekuti kudzidza hakupere. Kuvhura nzeve woterera hakutengeswe nekuti kusateerera kunopa chiuno kuti chiite zvine ngozi wakavarairwa wozokwakuka wave kuudzwa kunzi wawanikwa uine utachiona hweHIV.
Hongu zvakakosha kuzvidzivirira kudenda redzihwa mupengo asi ngatisakanganwai kuzvidzivirirawo kuhutachiona hweHIV.